Safiirka Shiinaha ee Soomaaliya oo qalab xafiiseed ku wareejiyay Ururka Haweenka Qaranka “SAWIRRO” – Radio Muqdisho
Munasabad kooban oo lagu qabtay xarunta Ururka Haweeynka Qaranka Soomaaliyeed ee Dagmada Xamar Weyne ayaa ahayd mid ururka Haweenka Qaranka ku muujinayeen saaxiibtinimada soo jireen ka ah ee Soomaaliya iyo Shiinaha xili Safarada Shiinaha maanta qalab xafiiseed dhameestiran ay ku wareejisay Ururka Haweenka Qaranka .
Guddoomiyaha Ururka Haweenka Qaranka Safiirka Shiinaha, Wasiiru-dowlaha Xafiiska Ra’isul Wasaraha, maamulka Gobolka iyo kan Degmada Xamar Weyne ayaa siwada jir ah u kormeeray xafiisyada ay safaradda qalabeysay .
Batuulo Sheekh Axmed Gabale Guddoomiyaha Ururka Haweenka Qaranka Soomaaliyeed ayaa uga mahadcelisay safiirka Shiinaha qalabka uu soo gareysiiyay oo ay qeyb ka yihiin harqaamo shaqa abuur lagu samey doono haweenka Soomaaliyeed.
Safiirka Shiinaha u fadhiya Soomaaliya ayaa sheegay in Haweenka Soomaaliyeed ay yihiin kuwa ka qeyb qaata horumarka dalkooda, ka dowlad ahaan ay la shaqeyn doonaan Ururka Haweenka kana saaci doonan sidii loo horumarin lahaa ururka.
Wasiiru-dowlaha Xafiiska Ra’isul Wasaraha Mudane Cabdullaahi Xaamud Maxamed oo gabagabadii munasabada ka hadalay ayaa sheegay Shiinaha iyo Soomaaliya uu ka dhaxeeyo xiriir saaxiibtinimo oo soo jireen ah, isagoo uga mahadceliyay kaalmada ay soo gaarsiiyeen ururka Haweenka Qaranka Soomaaliyeed.
Safiirka Shinaha oo xirnaa dharka Dhaqanka Soomaaliyeed ayaa la gudoonsiiyay qudradda dalkeena ka baxa iyo agabka Hidaha iyo Dhaqanka.
Dhageyso: Macalinka Xulka Qaranka Soomaaliya oo ka hadlay guusha ay gaareen